Onye isi oche Sandals Resorts Executive Chair nyere ndị isi na -eto eto na nturu ugo Pacesetter
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Onye isi oche Sandals Resorts Executive Chair nyere ndị isi na -eto eto na nturu ugo Pacesetter
Awards • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Resorts • Tourism • trending Ugbu a
A kwanyere Adam Stewart ugwu maka isetịpụ ihe nlereanya nke ịdị mma na ụlọ ọrụ njem
Adam Stewart, Onye isi oche nke Sandals Resorts International (SRI), ụlọ ọrụ nne na nna nke ụlọ oriri na ọ leadingụ Caribbeanụ Caribbean na-ewu ewu niile Sandals Resorts na Beach Resorts, nabatara nturu ugo 2021 “Pacesetter” na Fraịde, na ndị isi na-eto eto kwa afọ na Council Njem na Jamaica. Njem njem ALLIES, onye ọbịa ihe omume a, na -enye ndị ntorobịa na -eme njem nlegharị anya ihe nrite a kwa afọ, na -ebute ikwesị ntụkwasị obi na nraranye nye ndị ha na -edu ma na -ejere ozi, ebe na -eduzi ndị ọzọ ime otu ihe ahụ.
Stewart rụrụ ọrụ dị ka osote onye isi oche nke SRI ruo ihe karịrị afọ iri, na -enye aka na nkwalite nke ụdị akpụkpọ ụkwụ Sandals Resorts International.
O butere mgbanwe nke ika ahụ na mbinye aka ya ugbu a, Luxury Include® wee webata ebe obibi mmiri mbụ nke mpaghara ahụ.
Stewart na -ejekwa ozi dị ka onye isi oche nke ụlọ ọrụ ebere, Sandals Foundation.
N'àgwàetiti ebe a zụlitere ya, na-eche ndị na-ege ntị nke ndị isi na-eto eto nwere otu echiche na ndị ọkachamara njem njem nwere mmasị, Stewart tụgharịrị uche na ahụmịhe nke ya ịbụ onye ndu, yana nke nna ya nwụrụ anwụ, Onye guzobere SRI Gordon “Butch” Stewart, onye kpalitere ma kpalie ịdị ukwuu na mpaghara njem njem n'oge ndụ ya niile. “Ekele dịrị gị maka ohere a icheta na ịkekọrịta gị taa onye ubu m guzoro n'ụzọ m ịghọ na ịtụle nkuzi na idu ndú njem nke m kụziiri m ma ga -aga n'ihu na -akụziri m," Onye isi oche onye isi oche kwuru.
Tupu ọ rịgoro n'ọkwa onye isi ugbu a, Stewart rụrụ ọrụ dị ka onye osote onye isi oche ihe karịrị afọ iri, na -enye aka na nkwalite nke ụdị akpụkpọ ụkwụ Sandals Resorts International enweghị njedebe. O lekọtara oge mmụba dị ukwuu; gụnyere ebe ntụrụndụ osimiri atọ ugbu a na Jamaica na ndị Turks na Caicos, nke anọ na -abịa n'oge na -adịghị anya St. Vincent na Grenadines, yana ebe nchekwa akpụkpọ ụkwụ iri na ise na Antigua, Saint Lucia, The Bahamas, Barbados, na Grenada, na iri na isii ka ekwuputara na ọ ga -emepe na Curacao na Eprel 2022. Ọ gbakwụnyere mgbanwe nke ika ahụ na mbinye aka ya ugbu a, Luxury Include® ma webata ebe obibi mmiri mbụ nke mpaghara ahụ. Stewart na -ejekwa ozi dị ka onye isi oche nke ụlọ ọrụ ebere, Sandals Foundation, otu anaghị akwụ ụgwọ na -akwado ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ na ezinụlọ ndị nọ na mkpa, na -emezu nkwa inyeghachi obodo Caribbean.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara akara mmeri nke Sandals Resorts International, gaa sandals.com na osimiri.com .
Banyere Sandals Resorts International
Sandals Resorts International (SRI) bụ ụlọ ọrụ nne na nna nke ụfọdụ ụdị njem a na -ahụ anya gụnyere Sandals® Resorts, Beaches® Resorts, Grand Pineapple Beach Resort, Fowl Cay Resort na Jamaican Villas gị. Tọrọ ntọala na 1981, site na mbubreyo Gordon “Butch” Stewart, SRI hiwere isi na Montego Bay, Jamaica ma bụrụ maka mmepe mmepe, ụkpụrụ ọrụ, ọzụzụ nka na ịrụ ọrụ kwa ụbọchị. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na Sandals Resorts International.
Banyere Sandals Foundation
Sandals Foundation bụ ogwe aka na-ahụ maka ọdịmma nke Sandals Resorts International (SRI), ụlọ ọrụ ezumike ezinụlọ kacha nwee na Caribbean. E hiwere ọgbakọ 501 (c) (3) na-anaghị akwụ ụgwọ ka ọ gaa n'ihu wee gbasaa n'ọrụ ọrụ ebere nke Sandals Resorts International na-eme kemgbe mmalite ya na 1981 iji rụọ ọrụ bara uru na ndụ obodo ebe SRI na-arụ ọrụ na Caribbean niile. . Sandals Foundation na -akwado ọrụ na mpaghara atọ: agụmakwụkwọ, obodo na gburugburu. Otu narị pasent nke ego ọha na eze nyere na Sandals Foundation na -aga ozugbo na mmemme na -abara obodo Caribbean uru. Iji mụtakwuo maka Sandals Foundation, gaa na ntanetị na sandalsfoundation.org .
Banyere Travel ALLIES Society
Njem Njem Njem Njem, bụ otu ndị ahọpụtara nke na -eduzi ụlọ ọrụ njem, na -abịakọ na ebumnuche nke ịkwado ndị isi ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ. Ha na -agbasi mbọ ike iji azụmaahịa na -arụ ọrụ na -akwụwa aka ọtọ na ịkwanyere ndị na -ere ha na ndị ọrụ ibe ha ùgwù. Ọha obodo na -akwado ibe ha site na mmekọ pụrụiche ka ha na -ebuli onye ndu elu ma na -ebikọkwa njem njem ọnụ. Ndị otu ALLIES na -ebute mmụta, imekọ ihe ọnụ na ịkekọrịta omume kacha mma.
Dan Njikwa Pimental ekwu, sị:
September 22, 2021 na 09: 59
Ndewo, post a bụ ozi dị oke mkpa. M na -amụtakwu ihe. Ọ masịrị m ịgụ akwụkwọ a nke ọma iji chọọ ide edemede a mara mma na post na -enye aka ekele maka ịkekọrịta.